इन्द्रेणी अब बन्द हुने ! जब*र्जस्ति कार्यक्रम बन्द गराउन लागे भन्दै कृष्ण कडेलको रु*वावासी(भिडियो हेर्नुहोस) - Onlines Time
इन्द्रेणी अब बन्द हुने ! जब*र्जस्ति कार्यक्रम बन्द गराउन लागे भन्दै कृष्ण कडेलको रु*वावासी(भिडियो हेर्नुहोस)
March 26, 2021 onlinestimeLeaveaComment on इन्द्रेणी अब बन्द हुने ! जब*र्जस्ति कार्यक्रम बन्द गराउन लागे भन्दै कृष्ण कडेलको रु*वावासी(भिडियो हेर्नुहोस)
चर्चित कार्यक्रम ईन्द्रेणी माथिको बारम्बार आक्रमण पछि हिजो आज कृष्ण कंडेल तनाब मा छन । लोक दोहोरी लाई बिश्व सामु पुर्याउन का लागी बिगत लामो समय देखि निरन्तर लागि रहनु भएका कृष्ण कंडेल कलाकार ले नै आफुलाई तनाब दिएको र आफ्नो ईन्द्रेणी नामक युट्युब च्यानल नै उडाउन ठुलो गिरोह षड्यन्त्र आफ्नो पछि लागिरहेको कंडेल ले हामी संग बताएका छन ।
यस्तै कृष्ण कंडेल संग गरिएको सनसनीं पुर्ण अन्तर्वार्ता तलको लिंक किलिक गरेर हेर्न सक्नु हुनेछ । यस्तै नायक पल शाह र नायिका मलिका महत्तलाई लिएर केन्द्र मोशन पिक्चर्सले दुई वटा म्यूजिक भिडियो तयार गर्यो । ‘फुलबुट्टे सारीको महिला भर्सन र टाढा भएपनि’ बोलको गीतमा पल र मलिकाले काम गरे । यी दुबै गीतले दर्शकको उल्लेख्य साथ पाए । दर्शकले पल र मलिकाको जोडीलाई रुचाए ।
दर्शकले रुचाएको यो जोडीलाई अब भने केन्द्र मोशन पिक्चर्सले नयाँ संझौतामा बाँधेको छ । यी दुई कलाकारसँग केन्द्र मोशनले नयाँ संझौता गरेको वुझिएको छ । अब, पल र मलिकाले ६ महिनासम्म केन्द्र मोशन बाहेकको कम्पनीसँग एकसाथ म्यूजिक भिडियोमा काम गर्न पाउने छैनन् । केन्द्र मोशनले ६ महिनामा १० वटा भिडियो बनाउने गरि पल र मलिकासँग संझौता गरेको हो ।
वुझिएअनुसार, पल र मलिकाले अलग–अलग रुपमा अन्य कम्पनीका भिडियो गर्न पाउनेछन् । तर, एकसाथ जोडीको रुपमा भने उनीहरुले ६ महिनाका लागि केन्द्र मोशनसँग संझौतामा बाँधिएका छन् । नायिका मलिका महत्त परिक्षाको तयारीमा रहेकाले पनि नयाँ भिडियोको छायांकन सुरु हुन पाएको छैन । केन्द्र मोशनले पल र मलिकालाई लिएर चलचित्र बनाउने तयारी पनि थालेको छ । ६ महिना भित्रमा स्क्रिप्ट फाइनल गरेर चलचित्र सुरु गर्ने योजनामा यो कम्पनी रहेको वुझिएको छ ।
‘आखिर पापीहरूले मेरो बहिनीको ज्यान लिएरै छाडे’ …..
दाङमा एक युवायुवती एउटै रुखमा झु’ण्डिएको अवस्थामा फे’ला,